Taiga Siberia Taiga | Safarka Absolut
Daniel | | La cusboonaysiiyay 15/04/2021 12:24 | la fahmay
Taiga ama kaynta loo yaqaan 'boreal forest' waa erayga loo adeegsado in lagu aqoonsado nidaam deegaan oo gaar ah, oo ka mid ah dhirta waaweyn ee kaymaha isku dhafan ee ku baahsan gobollada woqooyi ee meeraha, soohdinta xudduudda Arctic.
Ereyga taiga waa Ruush, in kasta oo uu ka yimid luqadda yakuta, oo ay ku hadlaan qabiilooyin kala duwan oo reer Turki ah oo ka tirsan Siberia. Micnaheeda waa "dhul aan la daganayn" ama "dhul hawd ah." In kasta oo fikraduhu u muuqdaan kuwo macno ahaan u kala duwan, marka laga eego aragtida bulshada xoola-dhaqatada reer guuraaga ah haddana ficil ahaan waa isku mid.
Xuduudaha juqraafiyeed ee taiga waxay ku fidsan tahay seddex qaaradood: Waqooyiga Ameerika, Gaar ahaan Kanada, Waqooyiga Yurub y Siberia, ee Ruushka. Tani waa halka ay ku yaallo aagaggan duurjoogta ah ee waaweyn iyo kuwa duurjoogta ahi ku kasbadaan haybad weyn. Guud ahaan, marka qofku ka hadlayo taiga, shaki la’aan qofku wuxuu ka hadlayaa ta Siberia taiga, taiga ugu runta badan.
Kayntan aan dhamaadka lahayn waxay ku fidsan tahay kumanaan kiilomitir oo aan joogsi lahayn (qiyaastii 7.000 km bariga ilaa galbeed), ilaa buuro, bannaano iyo dhiiqo. Qaar ka mid ah keynta ku taal taiga Siberia waxay ka mid yihiin kuwa ugu da'da weyn meeraha.
1 Galbeedka Siberia Taiga
2 Dhirta caadiga ah ee taiga Siberia
Galbeedka Siberia Taiga
La galbeedka siberian taiga Waa hawd ballaadhan oo si aan kala go 'lahayn ugu fidiya inta u dhexeysa Buuraha Ural iyo Wabiga Yenisei. Waa keyn baaxad weyn, ficil ahaan bikro ah oo baaxaddiisu dhan tahay qiyaastii 1.670.000 kiiloomitir oo laba jibbaaran.
Gobolkan oo dhan ficil ahaan waa dad, inkasta oo xuduudaha koonfureed ee keynta ay jiraan magaalooyin waaweyn oo muhiim ah Yekaterinburg, oo ay ku nool yihiin qiyaastii 300.000 oo qof. Dhanka woqooyi, ka dib wareejinta kala-guurka ee qiyaastii 100 kiiloomitir, taiga ayaa siinaya jidka Dhuldhoobo.
Lateetka dartiis, ayaa cimilada taiga Siberia badanaa waa qabow. Waxaa loo yaqaanaa cimilada caalaamka, oo lagu garto xilliyada gaagaaban, xagaaga oo aad u qalalan iyo jiilaal dheer oo adag. Celceliska heerkulka xagaaga badanaa ma dhaafo 18-19º C, laakiin xilliga qaboobaha waxay hoos ugu dhacaan -30º C. Celceliska roobka waa 450-500 mm sanadkii.
Meelaha ugu muhiimsan ee la ilaaliyo ee gobolka, waa inaan sheegnaa Denezhkin Kamen, Ilmen, Sosva, Pripyshminskiye Bory iyo keydka dabeecadda Yugansky. Kaydadkaan waxaa lagu yaqaan Ruushka ereyga zapovednik, oo macnaheedu yahay "had iyo jeer aag duurjoog ah."
Dhirta caadiga ah ee taiga Siberia
Noocyada ugu waaweyn ee geedaha Siberia taiga waa cinjirrada, dhaadheer oo cagaar ah. Gobollada waqooyi aad ayey ugu badan yihiin larches, firs, spruurs iyo geedaha madow. Dhanka koonfureed, dhanka kale, cinjirku wuxuu ku dhex milmaa noocyada kale ee geedaha caleemaha ka baxa sida khariidado, bj birrk, geedaha dambaska, safsaafka y Geedaha geedku.
Taajka geedaha, kuwa sare iyo kuwa qaro weynba, ma oggola marinka qorraxda, sidaas darteed way ka koreeyaan dhammaan heerarka dhulka lichens iyo mossesWaxaa lagu qiyaasaa in ku dhowaad 40% carrada taiga ku taal ay daadad wataan. Aagaggan qoyan ee badan qoyaanka peatku way badan yihiin. Koonfur-galbeed ee gobolka waa Qoyaanka Vasyugan, mid ka mid ah buuraha ugu waawayn adduunka, oo kalluunkiisu gaadho moolka ka badan 2 mitir. Aagagga woqooyi ee woqooyi, oo aan geedo lahayn, dhulku wuu barafoobay baraf.
Taiga Siberia, gaar ahaan aagagga koonfurta, sidoo kale waxaa ku yaal geedo u eg kaymaha isku dhafan. Dhirta berry kuwooda ugu caansan waxaa ka mid ah currantsah qaboojiyaha, las miraha arctic ama buckthorn. Guga, marka barafka la saaro, way soo muuqdaan dhirta ubax cad.
Kaymaha waaweyn ee taiga waa hoyga noocyo badan oo xayawaanno kala duwan ah. Naasleyda dhexdeeda waxaan ka helnaa noocyo badan oo geedaha geedaha ah sida Reno, deerada ama digaag. Waxa kale oo jira jiir badan, ka bakayle cad, ka Marta iyo mink ilaa noocyada kala duwan ee dabagalo, bakayle iyo jiir.
Orsada buniga ah, mid ka mid ah dadka waaweyn ee taiga
Doomaha ugu waawayn waa lobo, Zorro, lynx iyo garka. Wuxuu mudan yahay cutub gooni ah bunni bunni, mid ka mid ah xayawaannada ugu matala fauna ee taayirka Siberia.
Shimbiraha dhexdooda waa inaan ku iftiiminaa xoogaa kufsadayaal sida kuwa gorgor, Gorgor iyo guumaysta arctic. Meelaha koonfurta ugu fog waxay sidoo kale degaan madow grouse iyo noocyo badan oo shimbiraha keymaha ah sida shimbirrood ama xaabsade. Cimilada qabow ee goboladaas awgood, xamaarato aad ayey u yartahay, in kastoo noocyada qaar ka mid ah xuurtada iyo xuurtada.
Tiro badan oo xayawaan ah ayaa ka badbaada jiilaalka dheer, qabowga iyo barafka ee taiga Siberia iyaga oo qaatay xaalad ah anabiosis (marka laga hadlayo qallafsanaanta) ama hibernación (sida naasleyda qaarkood sida orsada buniga ah ama dabagaalaha). Shimbiraha ayaa "ka cararaya" xaaladaha cimilada adag iyagoo u guuraya koonfurta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Taiga Siberia
aileona madow dijo
meesha aan ku riyoodo!
Ujawaabo aileona madow